Mon, Jul 13, 2020 at 2:03pm
आफ्नो जीवनलाई सञ्चालन गर्ने मूल शक्तिहरूलाई पत्ता लगाउन नभएर, आफ्ना विचारहरूलाई कुनै खास ठाउँमा पु¥याएर विश्राम गर्ने आतुरी भएको कारणले धेरै मानिसहरू सोच्ने र तर्क–वितर्क गर्ने काम गर्दछन् । उनीहरूमा प्रायः “तर्क अथवा सन्देहभन्दा टाढाका” सत्यहरूको स्थापना गर्ने आतुरी मुख्यरूपले आलोचकहरूमा पाइन्छ र उपन्यासकार र कथाकारहरूमा पनि यसको नराम्रो प्रभाव पर्दछ । लेखकको काम धेरै नै श्रेयष्कर हुन्छ, किनभने त्यसको..
यति सम्म प्रीति गरी गरी न यता भएँ न उता भएँ, नत मन् लियें नत दीदियें न यता भएँ न उता भएँ । नत होस् वासकि राखियो नत फूलको रस चाखियो, नत याद भो नत स्वाद भो, न यता भएँ न उता भएँ । बिनु औसरै सित भेट्नू तरबार लीकन रेट्नू, नत छिन्दिनू, नत नछिन्दिनू, न यता भएँ न उता भएँ । नत साथ बस्न सँगी..
कथा : उपहारभित्र उपहार अमिलोमा नअलमलिने आइमाई र उपहारमा नअलमलिने उपभोक्ता खोज्ने कार्य सगरमाथा चढ्ने कामभन्दा पनि गाह्रोे छ । तैँले कहिले सगरमाथा चढिस् ए ! नाथे ? भनेर तपाईंहरू मनमनै मलाई हपार्नु होला । ठीकै हो । म पनि मनमनै के भन्छु भने सबभन्दा गाह्रो काम गर्ने मेरो सानैदेखिको बानी भएकाले जाबो सगरमाथा चढ्ने काम मैले कहिल्यै गरिनँ । लोग्नेवादलाई लडाउन..
लघुकथा : परिणाम पशुपति गएकी श्रीमती हत्तारिंदै कोठा भित्र पसी । धेरैबेर भैसक्दा नि कोठाबाट निस्किने छाँटकाँट नदेखेपछि पढ्दै गरेको पत्रिका पन्छाएर म उठेर गएर कोठा भित्र यसो चिहाएँ । ऊ बिछ्यौनामा घोप्टो परेर रुँदैथिई । कुरा न कन्थो रुँदै गरेको देखेर आश्चर्य लाग्यो । सोध्ने आँट गर्न सकिनँ र टिठ लागेर ढोकामै उभिएँ । केहीबेर उभिई सकेपछि उ रुनुको कारण..
Results 64: You are at page3of 3